Abantu bashintsha isimo sezulu ngokuphindwe izikhathi eziyi-170 kunamandla emvelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Abantu bashintsha isimo sezulu ngokuphindwe izikhathi eziyi-170 kunamandla emvelo
Ukuguquka kwesimo sezulu. Lawa ngamagama amabili okuthi, yize emisha ngokuqhathaniswa, abhekisele kwizigameko zomhlaba ebezilokhu zenzeka kusukela ekuqaleni kweplanethi yomhlaba. Noma kunjalo, akukaze ngaphambili kube khona uhlobo olungaba nomthelela omkhulu emhlabeni njengabantu.
Singumhlanga ohlakaniphile. Sikwazile ukwenza amakoloni zonke izingxenye zomhlaba, futhi manje sisendleleni eya ezigidigidini eziyi-10. Kodwa kube yini izindleko? Abanye bakholelwa ukuthi ibhalansi yemvelo yephuliwe nokuthi sesizongena enkathini entsha yokwakheka komhlaba: iHolocene. Ngokwesifundo, Isimo sezulu sishintsha ngokuphindwe izikhathi eziyi-170 ngenxa yomsebenzi wabantu kunamandla emvelo. Lokhu kungaba namiphi imiphumela? Akwaziwa.
Ucwaningo, oluqhamuka e-Australia National University (ANU) futhi lwashicilelwa ku- Ukubuyekezwa kwe-Anthropocene, ihlola uMhlaba njengohlelo oluyinkimbinkimbi futhi ihlola umthelela abantu abanawo ekuhambeni kwawo. Ngakho-ke, abacwaningi bakwazi ukuthola lokho Ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okukhishwa ngabantu kule minyaka engama-45 edlule kukhuphule izinga lokukhuphuka laya ku-1,7ºC ngekhulu leminyaka.
Yize lokhu kungasho ukuthi amandla emvelo awanikeli. USolwazi Will Steffen esitatimendeni uthe "maqondana nomthelela wabo esikhathini esifushane kangako, manje sebebancane uma kuqhathaniswa nomthelela wethu".
Ingabe kukhona okungenziwa ukuvimbela isimo ukuba sibe sibi kakhulu? Ngokusho kukaSteffen, yebo: ukubheja emnothweni wokukhishwa okungu-zero. Kodwa isikhathi siyashesha ukuphela. Ngo-2050, inani labantu kulindeleke ukuthi lifinyelele ezigidini eziyisishiyagalolunye. Abantu abaningi basho ukufuneka kakhulu kwezinsizakusebenza, okuzoba nomthelela omubi kakhulu emhlabeni, ngaphandle kwalapho indlela yethu yokuphila iguqulwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Abantu bashintsha isimo sezulu ngokuphindwe izikhathi eziyi-170 kunamandla emvelo
Singena esigabeni esisha sokuma komhlaba: I-Anthropocene
Igagasi lokushisa elinonya e-Australia libulala amalulwane lapho zilele